राजपरिवारले प्रयोग गर्ने अस्पताल छाडेर विदेश धाउँछन् नेता | Daily State News
२ श्रावण २०७५, बुधबार १०:०८ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
पञ्चायतकालमा रानी ऐश्वर्यले यही कक्षमा भर्ना भएर उपचार गराएकी थिइन्। राजपरिवारका अन्य सदस्य पनि यहीँ भर्ना हुन्थे। ०४६ को जनआन्दोलनपछि यो अस्पताल अझ सुविधासम्पन्न होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। त्यसको ठीक उल्टो सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका नेताहरू उपचार गर्न विदेश धाइरहेका छन्। हामी कुरा गर्दैछौं वीर अस्पतालको।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको पाँच महिनामै उपचार खर्च नाममा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँडिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा छ। वेबसाइटअनुसार मन्त्रिपरिषदले पछिल्लोपटक असार ३ गते ताप्लेजुङका रविन सुनुवार र अनुप खिम्दिङलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख दिने निर्णय गरेको छ।
नेताहरूका मामिलामा यो अझ भयावह छ। कांग्रेस नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा बढीमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र उपचार खर्च दिने नियम बनाएका थिए। त्यो नियम उनकै सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले खिल्ली उडाउँदै कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए। मन्त्री थापा अनुपस्थित भएका बेला गृहमन्त्रीले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरिदिएको थियो।
‘नेपाली छोरीचेलीले यहीँ स्तन क्यान्सरको सफलतापूर्वक उपचार गराइरहेकै छन्,’ एक वरिष्ठ क्यान्सररोग विशेषज्ञले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसमाथि सिंगो उपचार मलेसियामै गराउँदा पनि ५० लाख त कुनै हालतमा लाग्दैन।’ ‘विदेश उपचारका नाममा खोलो बगाएजस्तो राज्यकोष रित्याउनुको साटो वीरको भिभिआइपी कक्ष किन प्रयोग गरिँदैन?’ उनको प्रश्न छ।
वीर अस्पतालको दक्षिणतर्फ भवनमा दोस्रो तल्ला उक्लनेबित्तिकै ‘भिआइपी क्याबिन’ लेखिएको देखिन्छ। ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै दायाँ र बायाँ दुईतिर करिडोर जान्छ। दाहिने जाँदा भिआइपी कक्ष पुगिन्छ भने बायाँ भिभिआइपी। भिभिआइपीमा पस्नेबित्तिकै फेरि अर्को ढोका आउँछ। त्यसपछि जहाँ पुगिन्छ, त्यो कुनै अस्पताल होइन, पाँचतारे होटलको करिडोर महशुस हुन्छ।
यो भिभिआइपी कक्ष संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई मात्र उपलब्ध गराउने अस्पतालको नीति छ। अर्कोतिरको भिआइपी कक्ष पनि सुविधासम्पन्न छ। यो बहालवालासहित पूर्व मन्त्री र सांसदसम्मले प्रयोग गर्न पाउँछन्। यही कक्षमा दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएकी शुद्ध नेपाली हामी पुग्दा सरसफाइमा व्यस्त थिइन्।
‘भिभिआइपी, भिआइपी र छेउका छवटा क्याबिन हेर्न हामी सात जना कर्मचारी र सात जना नर्सको बेग्लै व्यवस्था छ,’ वीरमै ३३ वर्ष बिताएकी नेपालीले भनिन्, ‘बिरामी आए पनि, नआए पनि हामीले नियमित सेवा दिनैपर्छ।’ उनले यो कक्षमा आफू काम गर्न थालेको दुई वर्षमा तीन जना बिरामी भर्ना भएको बताइन्। त्यतिबेला एक महिनाभन्दा बढी प्रयोग भएन।
‘भिभिआइपीमा भने हामीले देखेदेखि कोही उपचार गराउन नआएकाले कसरी हुन्छ अनुभव गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘पक्कै भिआइपी भन्दा बढी सतर्कतासाथ सेवा दिइन्छ होला।’ मन्त्री पोखरेल भर्ना भएका बेला मेडिकल र सर्जिकल डाक्टरको टोली गठन गरेर सेवा दिइएको थियो। एनेस्थेसियादेखि अन्य डाक्टर हरबखत तम्तयार रहन्थे। पोखरेलले भिभिआइपी कक्षका कोठामा मन्त्रालयको बैठकसमेत गरेको उनले स्मरण गरिन्।
यो अपवादबाहेक माओवादीका अन्य नेता सामान्य उपचार गराउनुपरे पनि विदेश जाने गरेका छन्। भर्खरै मात्र आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव थाइल्यान्ड पुगेका थिए। मन्त्री तथा नेताले विदेश उपचार गराउन जाँदा र फर्कंदा विमानस्थलको भिभिआइपी कक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सगर्व घोषणा गर्छन्। यसले मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर कसैले नसोचिदिएको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको गुनासो छ।
भुइँचालोलगत्तै पनि ठूलो लगानीमा मर्मत गरिएको त्यहाँका कर्मचारीले जानकारी दिए। लेखा प्रमुख खिमबहादुर सुवेदीले भने आफू आउनुअघिको खर्च भएकाले विवरण दिन नसकिने बताए। बिरामी चाप बढी भएर धेरैले बेड पाउन नसकेका बेला ठूलाबडानिम्ति बनाइएको विशिष्ट सुविधायुक्त कक्ष सधैं ताल्चा लगाएर राखिएको देख्दा अर्याल उदेक मान्छिन्।
अस्पतालभित्रकै महत्वपूर्ण सेवा र सुविधायुक्त भाग वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन देख्दा उनी अचम्म मान्छन्। ‘वीर अस्पताललाई महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेका कसैले विश्वास नगरेर यो अवस्था आएको हो,’ डा. केसीले भने, ‘जहाँसम्म मेरो क्षेत्रको कुरा छ, कलेजो प्रत्यारोपणबाहेक कुनै त्यस्तो उपचार छैन, जुन दिल्लीमा उपलब्ध होस् र यहाँ वीर अस्पतालमा नहोस्।’
कतिपय अन्य रोगनिम्ति वीरको चिकित्सा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय दाँजोमा कम नभएको उनको दाबी छ। ‘राम्रो डाक्टर र त्यति सुविधायुक्त कक्ष हुँदाहुँदै वीर अस्पताललाई विश्वास नगर्नुको कारण बुझिरहेको छैन,’ उनले थपे, ‘सायद यहाँका निर्देशकहरूले राम्ररी सम्झाउन, बुझाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’
अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. सरोज शर्मा भने खण्डन गर्छन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पहलमा यो सेवा–सुविधा तयार राखेको अवस्थामा उच्चपदस्थहरूलाई मन्त्रालयले जानकारी नदिएको पक्कै होइन,’ उनले भने, ‘तैपनि किन कोही आउनुहुन्न थाहा छैन।’
यी कक्षमा उच्च गुणस्तरीय सेवा ग्यारेन्टी गर्दै उनले थपे, ‘त्यसमा कतै तलमाथि पर्दैन।’ डा. शर्माका अनुसार वीरले दैनिक दुईदेखि तीन हजारभन्दा बढी बिरामीलाई बहिरंग विभागबाट सेवा दिइरहेको छ। चार सय २६ बेडमध्ये भुइँचालोयता सयवटा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यसले आएका बिरामी भर्ना गर्न मुश्किल परिरहेको डा. शर्माले बताए।
‘ठूलाबडाले नपत्याए पनि सर्वसाधारण नेपालीको सबभन्दा ठूलो विश्वास यही अस्पतालले आर्जन गरेको छ,’ उनले भने। कहिल्यै प्रयोगमा नआउने भिभिआइपी कक्षले ओगटेको क्षेत्र सर्वसाधारण बिरामीनिम्ति खुला गर्न पाए धेरैले राहत पाउने निमित्त निर्देशक डा. शर्मा स्वीकार्छन्। ‘यस्तो कुरा हामीले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णय गरिदिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो, जसले केही गरेको छैन।’- साभार:सेतोपाटी बाट